Premier Hotel Mapungubwe $67. Johannesburg Hotel Deals & Reviews - KAYAK
Latest deals for Premier Hotel Mapungubwe
Premier Hotel Mapungubwe is located at 52-54 Marshal Street in Central, 1 km from the centre of Johannesburg. Standard Bank Gallery is the closest landmark to Premier Hotel Mapungubwe.
Yes, Premier Hotel Mapungubwe has a pool on-site.
How does KAYAK find such great Premier Hotel Mapungubwe hotel deals?
KAYAK scours the web for all room deals available at Premier Hotel Mapungubwe in Johannesburg and lets you compare them to find the best rate for your stay. Many different travel sites will offer discounts or deals at different times for rooms at Premier Hotel Mapungubwe and KAYAK will provide you with prices from a huge range of travel sites. That means that you can always find a great deal for Premier Hotel Mapungubwe.
Premier Hotel Mapungubwe9.6 Excellent (2 reviews)0 kmOutdoor pool, Fitness centre, Restaurant$67+
Reef Hotel7.7 Good (1,174 reviews)0.43 kmFitness centre, Restaurant, Bar/Lounge$72+
Rand Club Hotel8.5 Excellent (56 reviews)0.51 kmRestaurant, Bar/Lounge, Free Wi-Fi$116+
City Lodge Hotel Newtown8.7 Excellent (265 reviews)1 kmOutdoor pool, Fitness centre, Restaurant$67+
29% cheaperBusinessburg Hotel5.5 Okay (144 reviews)1.34 kmWi-Fi, Tea/coffee maker, Free parking$48+
19% cheaperHotel Galaxy Tower8.4 Excellent (216 reviews)1.46 kmWi-Fi, Tea/coffee maker, Wi-Fi available in all areas$54+
14% cheaperMillennium Hotel fordsburg7.7 Good (433 reviews)1.52 kmWi-Fi, Free parking, Wi-Fi available in all areas$58+
12% cheaperBannister Hotel6.9 Good (621 reviews)1.61 kmRestaurant, Bar/Lounge, Room service$59+
Search for Premier Hotel Mapungubwe discounts in Johannesburg with KAYAK. Search for the cheapest hotel deal for Premier Hotel Mapungubwe in Johannesburg. KAYAK searches hundreds of travel sites to help you find and book the hotel deal at Premier Hotel Mapungubwe that suits you best. $67 per night (Latest starting price for this hotel).